N'ime nkwekọrịta a ("nkwekọrịta") "gị" na "gị" na-ezo aka na ndị ahịa ọ bụla, "anyị," anyị, "anyị," "LL," na "ụlọ ọrụ" na-ezo aka Ndị ọka iwu nwere oke (nke na-ejikwa aha njirimara Inclọ ọrụ Incorporated, Ndị na-eme atụmatụ nchebe nke akụ, Company Offshore, yana ụdị na weebụsaịtị ndị ọzọ), ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya, ndị isi ọrụ, ndị isi na ndị mmekọ yana "Ọrụ" na-ezo aka na ọrụ ndị anyị nyere. Nkwekọrịta a na-akọwa ọrụ anyị na gị na ọrụ gị nye anyị dịka ha metụtara Ọrụ. Site na iji Ọrụ dị n'okpuru Agreement a, ị kwenyere na ị gụọla ma kwenye na iwu niile na nkwekọrịta nke nkwekọrịta a yana iwu ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ nke anyị nwere ike bipụtara. Kwenyere na ị gafeela afọ iri na asatọ, maọbụ na ị rutela ọtụtụ nke ikike gị.
N'ikwekọ na nkwekọrịta a, LL ga-eme nyocha mbido, na-ejikọghị aha iji chọpụta ma ụlọ ọrụ aha ị họọrọ ka ụlọ ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ na steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo ị họọrọ. (Corporationlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-ejighị ụgwọ, na / ma ọ bụ ụdị ihe ndị yiri ya ka ejiri na-arụ ọrụ n'ime ebe a.) Ọ bụrụ na aha ụlọ ọrụ ahọpụtara adịghị, LL ga-ahụ (n'usoro ịchọrọ nke ị depụtara na ngwa gị) chọọ ụlọ ọrụ ọzọ aha ị nyere ruo mgbe nsonaazụ ọchụchọ ga-eweta aha ụlọ ọrụ dị. Ọ bụrụ na itinyeghị onye nrụpụta ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị (ntụgharị, "Inc.," "Corp.," ma ọ bụ "Corporation") LL ga-agbakwunye "Inc." (ma ọ bụ "”lọ ọrụ" maka ụlọ ọrụ ndị nwere obere ụgwọ) suffix na ntinye akwụkwọ na steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo ị họọrọ.
Kwenyere na ị na-ahụ maka mkpoputa nke aha ụlọ ọrụ ị nyere. I kwenyere na ị nyochara ugboro abụọ na aha ụlọ ọrụ ndị a dị na ya ka edepụtara dị ka ịchọrọ. Understand ghọtara na arịrịọ a anaghị agbanwe agbanwe mgbe ị nyefere arịrịọ gị.
Ọ bụ ezie na anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ozi ọhụụ emelitere kachasị nso, anyị enweghị ike ịkwado na enyere anyị ozi kachasị ọhụrụ na aha ụlọ ọrụ. N'ihi ya, anyị anaghị ekwe gị nkwa na aha ahụ dị maka ojiji dị ka aha ụlọ ọrụ na steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo gị. LL anaghị arụ ọrụ ọ bụla maka ịdabere na nnweta aha ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, anyị na-atụ aro ka ị ghara ibipụta akwụkwọ ozi, kaadị azụmaahịa ma ọ bụ tinye ego ọ bụla na aha ahụ ruo mgbe ị nwetara nkwenye gọọmentị na aha ahụ anabatala ma debe ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na aha ụlọ ọrụ gị na ndị ọzọ adịghị, na ịnyeghị ndị ọzọ na ederede na ụbọchị nke iwu gị, ị ga-enye LL ikike itinye okwu "Enterprises," "Holdings," "Management," "Ventures, ”Ma ọ bụ“ Isi Obodo ”ruo na njedebe nke aha ahụ. Ọ bụrụ na ụdị ndị ọzọ adịghị, naanị ọgwụgwọ gị ga-ejedebe na ụgwọ a kwụrụ LL. Lee ngalaba nkwụghachi na ụgwọ ebe a maka nkọwa ndị ọzọ.
Anyị enweghị ike ma ghara ịlele ịhụ ma aha ụlọ ọrụ ị họọrọ, ma ọ bụ ojiji ị na-eji aha ụlọ ọrụ eme ihe, na-emebi ikike iwu nke ndị ọzọ. Anyị na-agba gị ume inyocha iji chọpụta ma aha ụlọ ọrụ ị họọrọ ma ọ bụ ojiji ya na-emebi ikike iwu nke ndị ọzọ, ọkachasị anyị na-atụ aro na ị ga-achọ ndụmọdụ nke ndụmọdụ tozuru etozu nyere ikike ịme iwu na ikike metụtara.
Nkwụghachi ụgwọ na ụgwọ
Ọ bụrụ na a kagbuo iwu ụlọ ọrụ US mgbe LL ewerela ịkwụ ụgwọ mana tupu emechaa nyocha aha, LL ga-eweghachite ọnụego ego iji belata ụgwọ ọ bụla na $ 95 dollar nhazi ego. Ọ bụrụ na kagbuo iwu ahụ mgbe aha aha gwụchara ma tupu e mepụta akwụkwọ edemede, LL ga-akwụghachi ụgwọ ego zuru ezu karịa $ 125 nhazi ego. Ọ bụrụ na akagbuo iwu ahụ mgbe emechara akwụkwọ nguzobe, LL ga-akwụghachi ego niile nke iwu ahụ ka ọ ga-akwụ ụgwọ $ 195 dollar na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na gọọmentị etinyebeghị akwụkwọ nhazi ahụ. Maka usoro ụlọ ọrụ na mpụga US, ọ bụrụ na LL nyere ikike nkwụghachi nkwụghachi kachasị bụ ego a kwụrụ obere nke $ 495 ma ọ bụ pasent iri abụọ nke ọnụahịa ịzụta. Na mgbakwunye, ego akwụgoro LL nke akwụgoro gọọmentị maka ịgba akwụkwọ, ndị mmekọ, ndị na-eweta ngwaahịa ma ọ bụ mmefu ndị ọzọ iji mezuo iwu gị enweghị nkwụghachi, gụnyere, mana ọnweghị oke, ụgwọ nhazi kredit kaadị.
Ozugbo ezigara ụlọ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ gọọmentị maka ịdebanye aha ndị ahịa ma ọ bụ tụkwasịrị ntụkwasị obi ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ edepụtara iwu enweghị ike ịkwụghachi ma ọ bụ kagbuo.
A ga-agbakwunye ego $ 75 na nyocha niile eweghachiri na LL n'ihi ego na-ezughi oke ma ọ bụ akaụntụ mechiri emechi. Na mgbakwunye, a ga-akwụ ụgwọ ego ụlọ akụ na ndenye ego ndị a.
Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na LL ga-agbasi mbọ ike iji kwado ndị ahịa anyị, njehie ma ọ bụ mmejọ mmadụ nwere ike ime. Yabụ, ọ bụrụ na maka ebumnuche ọ bụla maka itinye akwụkwọ gị, arịrịọ e guzobere LLC, arịrịọ ntụkwasị obi, ọchụchọ ụghalaahịa ma ọ bụ arịrịọ ngwa ngwa edenyere ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ na-egbu oge na-enweghị ezi uche, bibie, gahiere ụzọ, ma ọ bụ na-efu efu, LL agaghị aza ajụjụ maka nsogbu ọ bụla, ihe ọ bụla, Ma ọ bụ mmebi mmebi. AH SOLR SOL SOLBỌCH WITH NA LL G BE B R EGO zuru ezu nke ego ọ bụla na ụgwọ niile a kwụrụ iji LL maka ọrụ anyị dị ka e kwere n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị a.
Ọ bụrụ na etinyego iwu ngwa ngwa, anyị ga-eme ike anyị niile iji mezue ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dabere na arịrịọ gị. N'ihi na LL na-eme ike gị niile iji hụ na oke na ụlọ ọrụ gị ịgba akwụkwọ, anyị anaghị ekwe gị nkwa na a ga-etinye iwu ahụ n'oge ịchọrọ. Ọ bụrụ na ewepụghị iwu ngwa ngwa gị n'oge, naanị ọgwụgwọ gị ga-ejedebe na nkwụghachi nke ụgwọ ndị ọzọ akwụ ụgwọ maka ịgba akwụkwọ ọsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na ị kwụrụ site na nlele na faksị, lelee site na ekwentị, lelee site na Internetntanetị, ACH ma ọ bụ usoro yiri ya, a ga-enwe njide na usoro gị ruo mgbe ụlọ akụ anyị gosipụtara na ịkwụ ụgwọ gị ekpochala. Oge a na-ahụkarị ya bụ ụbọchị azụmahịa atọ ma ọ bụ ise, anaghị etinye ngwụsị izu ma ọ bụ ezumike ụlọ akụ. Oge a dabere na ụlọ akụ ma ọ bụghị LL. Naanị mgbe anyị natara nkwenye na ego ekpochapụla ka anyị na-amalite ịhazi usoro gị.
LL na-agbasi mbọ ike iso ndị ahịa kwurịta okwu. Agbanyeghị, ozi ekwentị niile, ozi ịntanetị ma ọ bụ ụzọ nkwukọrịta ọzọ nwere ike ọ gaghị anabataghachi azịza otu narị narị oge.
A na-etinye iwu n'oge enyere ya na LL site na ịntanetị, ekwentị, facsimile ma ọ bụ ozi. Enwere ike ịghara ime mgbanwe na iwu gị mgbe nrubeisi belụsọ na LL nyere ikike. Na-esote nnata nke ikike tupu oge a, mgbanwe maka iwu a dị irè naanị mgbe LL natara akwụkwọ ntinye aka n'aka gị site na faksị. Enwere mmefu ego na oge iji mezuo iwu. Ya mere, a ga-edozi arịrịọ ọ bụla ị chọrọ ịkagbu site na akwụkwọ nnata akwụkwọ ozi anabatara ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ ịkpọtụrụ anyị na https://companiesinc.com/ 24 oge awa azụmaahịa tupu anyị eziga iwu gị na ụlọ ọrụ gọọmentị maka ịgba akwụkwọ ma ọ bụ tupu ọrụ amalite. nyere. Oge azụmahịa ọtụtụ izu ụka bụ 6: 00 AM ka 5: 00 PM PST ewepu ezumike mba.
Fọdụ ikike chọrọ ka ị nye akwụkwọ nkwado siri ike tupu etinye akwụkwọ ma ọ bụ nyefee ụlọ ọrụ ahụ. Akwụkwọ ndị a nwere ike ịgụnye mana ọnweghị ike ịbelata otu akwụkwọ ikike ngafe nke akwụkwọ ikike, ụgwọ izizi mbụ, ihe ndekọ ego ụlọ akụ, na / ma ọ bụ leta ụlọ akụ. N'ógbè ụfọdụ, anyị nwere ike ịde akwụkwọ mana enweghị ike ịnye ụlọ ọrụ gị n'ụzọ iwu ruo mgbe ị nyere akwụkwọ ahụ. Na mpaghara ndị ọzọ anyị na-akwụ ụgwọ mana mana enweghị ike ịdebanye ụlọ ọrụ gị ruo mgbe ị nyere akwụkwọ achọrọ. Activitiesfọdụ ihe omume chọrọ echiche iwu. Documentsfọdụ akwụkwọ nwere ike ọ dị mkpa ịtụgharị asụsụ Bekee ma ọ bụ asụsụ ọzọ. Y’oburu na enwere ugwo maka ihe ndi ozo a choro, you na ahu maka ha. Anyị na-ata ahụhụ mmefu ụlọ ọrụ dị ka ụgwọ gọọmentị na nke ndị nnọchi anya na ụgwọ ndị a agaghị akwụghachi anyị. ,, N'aka nke gị, kwenyere na ị ga-ahụ maka ịnye akwụkwọ nyocha achọrọ, n'agbanyeghị arịrịọ ahụ, yana nkwụghachi adịghị ma ọ bụrụ na ị naghị erubere iwu nyocha ahụ.
Inye afọ ojuju nke ndị ahịa pụtara otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị a: (1) na a nabatara akwụkwọ maka ịdebanye na zọọ akara site n'aka ụlọ ọrụ gọọmentị, ma ọ bụ (2) na akwụkwọ enyere iwu ka edepụtara ma nyefee ya site n'aka ndị na-ebu ndị nkịtị, nnyefe eletrọniki ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ. ma ọ bụ (3) ka arụ ọrụ ndị enyere. Ọ bụrụ na nke ọ bụla dị n'elu bụ eziokwu maka akụkụ ọ bụla nke iwu ahụ, ị ​​kwenyere na afọ juru gị na usoro niile.
NKWUKWU AKA NA-EGO
ANY DIS na-ekwupụta akwụkwọ ikike niile, ma ọ bụ nkwupụta ma ọ bụ nke etinyere, maka ọzụ ahịa ma ọ bụ nnabata maka ebumnuche pụrụ iche. Jfọdụ ikike ikike anaghị anabata mwepu nke akwụkwọ ikike egosi, yabụ mwepu ahụ dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
Enwere ike ịnwe ego ndị ọzọ nke gọọmentị ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ ga-abụ mgbe emechara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ ma ọ bụ gbaa akwụkwọ na / ma ọ bụ zigara gị. Iji maa atụ, US State of Nevada chọrọ ndepụta nke ndị ọrụ ka edebara akwụkwọ n'oge na-adịghị anya etinyere ụlọ ọrụ ahụ. Dika ide ederede ego a bu $ 150 gbakwunye ego ikike $ 500. Ihe omuma atu ozo bu na Steti nke California nwere ugwo onu ahia obula nke ugwo nke di iche iche dabere na onu ahia ulo oru ha. Ọ bụrụ n'ịzụrụ ụlọ ọrụ merela agadi / shelf, ụgwọ mmeghari ohuru nwere ike ịbụ n'oge na-adịghị anya ụbọchị ịzụta gị Ebe ọ bụ na ụgwọ ndị a erughị na ntinye mbụ nke ụlọ ọrụ, LL nwere ike ọ gaghị akwụ gị ụgwọ maka ntinye akwụkwọ a na-esote na ụgwọ izizi ụgwọ izizi. A ga-achọ ka ị kpuchie steeti, mba, onye ọrụ na / ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ tupu ụbọchị a kara aka iji mee ka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ nọrọ n'ọnọdụ dị mma na steeti ma ọ bụ mba e guzobere. A na-achọkarị gị ka ịdebe onye na-edebanye aha maka ọrụ nke usoro iwu na steeti ma ọ bụ obodo nke nnabata na ikike ọ bụla ebe ụlọ ọrụ gị, dị ka ikike ikike ya si dị, na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na LL na-akwụ gị ụgwọ maka mmeghari ohuru nke ụlọ ọrụ iwu gị, anyị na-eme nke ọma tupu ụbọchị ruru. Nke ahụ bụ n'ihi na a na-enwekarị ntaramahụhụ, ụgwọ oge na-adịghị anya, ntaramahụhụ na / ma ọ bụ kagbuo ndị ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka oge ịgba akwụkwọ. Billgba ụgwọ oge mbụ na-enye anyị ihe mkpuchi iji nyere aka gbochie gọọmentị ma ọ bụ ihe ọzọ dị na nsonaazụ nke ịgba akwụkwọ oge. Ọ bụ ọrụ gị ma ọ bụghị nke LL iji debe ngwa ọrụ iwu gị nke ọma. Enwere ụgwọ mmeghari ohuru maka ntụkwasị obi nke mba ụwa gụnyere, mana ọnweghị oke na, onye na-elekọta ụlọ na ụgwọ gọọmentị. Dika ede ederede a ego maka ọrụ ndị nnọchi anya aha ya bụ $ 189 kwa afọ maka steeti US ọ bụla na $ 245 kwa afọ na mpaghara Canada ọ bụla. Ego mmeghari ohuru di iche na mba ndi ozo. Ọ bụrụ na ịkwụghị gọọmentị ụgwọ ụgwọ mmeghari ohuru gị na ụlọ ọrụ gị na-abanye n'ụdị mkparị na-eguzo na gọọmentị (nke okwu ya dịgasị iche site na steeti), nke ahụ bụ ihe na-egosi na ịchọkwaghị ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị gwaghị LL ma ọ bụrụ na ịdeghị ederede na ederede tupu ọnọdụ nleda anya ya nke edere ya na njikwa, ị na-enye LL ikike itinye ụlọ ọrụ ahụ ị gosipụtara na ị chọghị ire ere dịka ụlọ ọrụ meworo agadi, gbanwee aha ya na / ma ọ weghachite nguzo ya.
NKWUKWU NDUB ỌZỌ
Statefọdụ iwu obodo chọrọ ka ụlọ ọrụ bipụta ịdị adị ha na akwụkwọ akụkọ ewepụtara. LL nwere ike, na nhọrọ ya naanị, rụọ ọrụ a maka onye ahịa, ọkachasị ma achọrọ ya n'aka onye na-etinye aha ya ma ọ bụ onye nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ. Nkwupụta na weebụsaịtị anyị iji gosipụta na nguzobe “Ahịa gụnyere ụgwọ mbipụta akwụkwọ ebe achọrọ” pụtara ebe achọrọ nke onye na-etinye aha ya ma ọ bụ onye nhazi. LL agaghị ebipụta ma ọ bụ kwụọ ụgwọ mbipụta na steeti ụfọdụ, gụnyere ma ọnweghị oke na, mbipụta mbipụta nke ụlọ ọrụ New York Limited Liability Company. Emere gị ka ị mara na ọ bụrụ na ị rịọ ka e guzobe New York LLC na mbipụta mbipụta nwere ike bụrụ ọnụ ọnụ karịa nhazi mbụ nke LLC n'onwe ya ma ị ga-ahụ maka ụgwọ ndị a.
Ndụmọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ gbasara ego na nnọchite anya
LL bụ ọrụ mbipụta ịntanetị. Ihe ndị dị na weebụsaịtị a nwere ozi nke ngwa ngwa n'ozuzu ma ọ bụghị iji dochie ndụmọdụ nke onye ọka iwu. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ anyị na-agbasi mbọ ike iji debe ma bipụta ozi ziri ezi, Iwu Steeti, nke Gọọmentị na nke Federal na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe mgbe niile. Tụkwasị na nke ahụ, iwu na-emeghe nkọwa dị iche iche ma na-adịgasị iche iche n'etiti ọchịchị dị iche iche.
Mgbe ị na-eji ọrụ anyị, ị ga-arụ ọrụ dị ka onye ọka iwu nke gị. LL mezue ozi na ụdị achọrọ dabere na ozi ị nyere anyị na ntinye gị "Arịrịọ maka orlọ Ọrụ" ma ọ bụ "Forlọ Ọrụ LLClọ Ọrụ" ma tinye faịlụ ndị chọrọ na ụlọ ọrụ gọọmentị, nke mpaghara ma ọ bụ nke gọọmentị kwesịrị ekwesị. Site na ịnye gị ọrụ a, LL, ndị ndụmọdụ ya, ndị nnọchi anya ya, ndị nnọchi anya ya na ndị ọrụ anaghị enye iwu ọ bụla, ụtụ isi ma ọ bụ ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, na enweghị nnọchite ma ọ bụ ikike, nke ekwupụtara ma ọ bụ nke ekwuputara, enyere maka iwu ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. nke sitere na iji ọrụ ma ọ bụ ụdị anyị.
LL, ndị ndụmọdụ ya, ndị nnọchi anya ya, ndị nnọchi anya ya, na ndị ọrụ anaghị etinye aka na iwu ma enweghị ike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu. Agbanyeghị LL na-agbasi mbọ ike ma na-asọpụrụ ụdị nzuzo nke ozi ị na-enyefe anyị, Ọ BELGH R IKPE ỌZỌ ma ọ bụ ihe ùgwù dị n'etiti LL na gị, gụnyere ma ọnweghị oke na mmekọrịta Ọka Iwu na Onye Ọkachamara nwere ike ịdị ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ onye ọka iwu nwere ikike .
Ọ bụrụ n ’onye ọka iwu jikọtara ya na LL na-ekwu okwu, ị kwenyere na ọ nweghị ihe a ga-ewere dị ka ndụmọdụ gbasara iwu maka okwu ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. LL na / ma ọ bụ ndị ọka iwu nwere mmekọ na-enye naanị ozi n'ozuzu, abụghị ndị ndụmọdụ ụtụ isi, ma ha agaghị enye gị iwu, ụtụ isi ma ọ bụ ndụmọdụ metụtara iwu gbasara ọrụ anyị. Kwesịrị ịchọ ndụmọdụ gbasara iwu na ụtụ isi nke onwe gị. Otutu ma obu ndi mmadu nile emeputara LL bu ndi na adighi elekota ego anya na ego obula enwetara, ma obu nke ndi ulo ma obu nke ndi mba ozo, bu ndi akuko na ego a ritere na agbanyeghị ma eweputara ma obu eweghachi ego di otua ma obu mba ụwa. Ọzọkwa, ozi ọ bụla enwetara site na LL na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere mmekọ na / ma ọ bụ ndị ọka iwu (s) ezubereghị ịmepụta, na mkparịta ụka, nnata, nlele ma ọ bụ onye nduzi ọzọ ma ọ bụ mmekọrịta na-enweghị isi adịghị, mmekọrịta onye ọka iwu na ndị ahịa yana ụgwọ ọ bụla akwụ ụgwọ agaghị ewere ya dị ka ụgwọ iwu.
Dị ka ọ dị n'okwu azụmahịa niile dị mkpa, LL, ndị ndụmọdụ ya, ndị nnọchi anya ya, ndị nnọchi anya ya na ndị ọrụ ya na-atụ aro ka ị kpọtụrụ onye ọka iwu nwere ikike ịme iwu yana CPA nwere ikike na ikike metụtara ngalaba ụlọ ọrụ gị, LLC, ntụkwasị obi ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ anyị na-enye yana arụmọrụ ya na-aga n'ihu.
Gwọ, ịkwụ ụgwọ na oge
Maka ntụle maka ọrụ ndị ahọpụtara, ị kwenyere ịkwụ anyị ụgwọ ụgwọ (s) ọrụ dị mkpa. Ego niile a ga-akwụ ebe a anaghị akwụghachi belụsọ na anyị nyere ndị ọzọ. Dịka ịtụle maka Ọrụ ndị a, ị kwenyere na: (1) inye ụfọdụ ozi dị ugbu a, zuru oke ma zie ezi banyere gị dị ka usoro ngwa ahụ chọrọ yana (2) ilekọta ma melite ozi a dịka mkpa iji mee ka ọ dị ugbu a, zuru oke ma zie ezi. A ga-eziga ozi niile dị ka ozi akaụntụ ("Ozi Akaụntụ").
Here si ugbu a nye anyị ikike igosipụta ndị ọzọ dị otú ahụ na Akaụntụ Ozi. Site na mezue ma nyefee aha ndebanye aha ụlọ ọrụ, ị na-anọchi anya na Ozi Akaụntụ na ngwa gị ziri ezi nakwa na ndebanye aha Aha Aha ahọrọ, ka ị maara, anaghị egbochi ma ọ bụ na-emebi ikike nke atọ ọ bụla otu. Represent na-anọchite anya na aha ụlọ ọrụ anaghị edebanye aha maka nzube iwu na-akwadoghị.
Y’oburu n’icho ikike ikike na akwukwo ahia gi nke kariri onu ogugu onu ahia nke ndi ochichi a choputara, mpaghara ma obu obodo maka ego ntinye ego kacha nta, ị ga-ahụta maka ụgwọ ụtụ isi ọ bụla emere n’oge ọ bụla. . Fọdụ, ma ọ bụghị ha niile, ikike na-akwụ ụgwọ ụgwọ ịgba ụgwọ ọzọ mgbe ọnụọgụ mbak na / ma ọ bụ ngụkọta ngwaahịa bara uru na-abawanye. Ọ bụ ọrụ gị ịchọpụta ọnụ ọgụgụ kachasị nke mbak nke steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo kwere ka ị tozuo maka ego ntinye akwụkwọ kacha nta. A na - ahọrọ ọnụọgụ ikike na Articlọ Ọrụ Njikọ aka gị naanị site na nghọta gị. Ọ bụrụ na ị naghị akụzịrị anyị ụzọ ọzọ, usoro ihe eji emepụta ngwaahịa bụ ego 1500 na enweghị uru ọ bụla belụsọ na ihe ọnụọgụgụ omenala dị iche na otu ikike ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ pere mpe ruru eru maka ego ntinye akwụkwọ kacha nta.
Mgbe ọdabara, LL na-enyefe ụlọ ọrụ gọọmentị kwesịrị ekwesị maka ịgba akwụkwọ. Mgbe LL natara akwụkwọ n'aka ụlọ ọrụ gọọmentị, LL, n'aka nke ya, na-ebugara gị akwụkwọ ndị a dabere na ngwugwu ị nyere iwu. Kwenyere na ụlọ ọrụ gọọmentị, ọ bụghị LL, na-achịkwa oge a na-ede akwụkwọ ụlọ ọrụ wee laghachi na LL.
Mgbe etinyere ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụrụ na ejiri ụlọ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ ụlọ ọrụ tinye ya na iwu ahụ, a ga-arụ ya mgbe gọọmentị gbara akwụkwọ ụlọ ọrụ ma kwado ya. (Ihe kpatara nke a bụ na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume nye iwu ka ụlọ ọrụ tinye ya ruo mgbe gọọmentị kwadoro aha ahụ ka e wee ghara ịmepụta kit aha gọọmentị jụrụ.)
AKWPKWỌ na ịdebanye akwụkwọ chọrọ
LL abụghị ọrụ maka inye ndụmọdụ ma ọ bụ ichetara gị ihe ọ bụla chọrọ ma ọ bụ ọrụ, gụnyere, mana ọnweghị oke na akụkọ ọ bụla kwa afọ, ntinye akwụkwọ ụtụ, ụtụ isi, ma ọ bụ steeti, mpaghara, mpaghara ma ọ bụ gọọmentị etiti chọrọ akwụkwọ ma ọ bụ ụgwọ ndị metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị nye gị. Dika ede ederede a, enwere 3,007 na United States nwere otutu ihe choro na ugwo. N'ihi ọnụọgụ nke mpaghara na ikike ndị ọzọ yana iwu na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa ụgwọ ịgba akwụkwọ, ụtụ isi na ihe ndị ọzọ achọrọ nke mpaghara gị, parish, steeti, obodo ma ọ bụ ikike ndị ọzọ dị mkpa. Ntinye LL na ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị ga-akwụsị n'oge e mepụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ihe ọ bụla achọrọ ma ọ bụ ọrụ maka mmezi nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị abụghị ọrụ nke LL ma ọ bụ naanị ọrụ dịịrị gị. Karịsịa, belụsọ ma ị nyere iwu maka LL ime nke a, iwu ọ bụla na steeti, mpaghara, mpaghara ma ọ bụ gọọmentị etiti metụtara ụlọ ọrụ gị, LLC ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ga-abụ naanị ọrụ gị. Nke a gụnyere, mana ọnweghị oke na, ntinye akwụkwọ maka ọkwa ntuli aka nke Isi S Corporation gị. Mustdị iji tinye maka ọnọdụ S-Corporation ga-abanyerịrị onye ọrụ ụlọ ọrụ gị bịanyere aka na ya. Ebe anyị abụghị onye isi ụlọ ọrụ gị, anyị enweghị ike ịbịanye ma debanye mpempe akwụkwọ a. Ọbụlagodi na enyere ndị ọrụ nhọpụta / ọrụ nchịkwa / ọrụ njikwa aka, anyị agaghị achọ ka anyị depụta ụdị ụdị a ma ọ bụ mee ihe n'aha ụlọ ọrụ belụsọ na ndị nwere ikike nyere ya ederede. Anaghị ejide anyị n'aka maka ụdị ụtụ isi na-efu ma ọ bụ mbubreyo ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ndị ọzọ, omume ma ọ bụ arụghị belụsọ belụsọ na-wayo aghụghọ, nke ga-abụ onye ahọpụtara, ọ bụghị LL. LL bụ ọrụ nkwadebe akwụkwọ na ntinye akwụkwọ na ọ bụghị ụtụ isi ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu. Ekwesịrị inweta ụtụ na ikike iwu site na ikikere, ndị nwere nghọta, ndị otu na-arụ ọrụ ndị a dịka ndị ọka iwu na ndị na-edekọ ego.
Ọ bụrụ na, maka ego ọzọ, ịrịọ enyemaka anyị na mmeghe nke ụlọ akụ, anyị ga-agba mbọ mepee akaụntụ nke ga-egbo mkpa gị. Agbanyeghị, ị kwenyere na LL anaghị achịkwa ọrụ ndị akụ na-enye ma ọ bụ nke ụlọ akụ ga-emepe ma ọ bụ mepee ụdị akaụntụ ịchọrọ, yana mbọ ị na-eme iji mezue akwụkwọ akụ chọrọ. Kwenyere na ụlọ akụ, mana ọ bụghị LL, na-achịkwa ọsọ nke akaụntụ ụlọ akụ ga-emepe ma ọ bụ na agaghị emeghe. Agree kwenyere na ị ga-ahụ maka dejupụta akwụkwọ mmeghe akaụntụ ụlọ akụ n'ozuzu ya ma nye ozi niile ụlọ akụ ahụ rịọrọ maka imeghe akaụntụ.
Ọ na-abụkarị maka ọdịmma gị ka ị ghara ịkpọtụrụ ụlọ akụ ruo mgbe akaụntụ mepere. Ihe kpatara ya bụ na anyị ahụla ndị ahịa n'ọtụtụ oge na-ekwu okwu na ụlọ akụ ma ọ bụ na-agwa ụlọ akụ ahụ okwu iji gbochie mmeghe akaụntụ.
Agree kwenyere ijide LL na-enweghị mmerụ maka atumatu ụlọ akụ na ọnọdụ gụnyere, mana ọnweghị oke, ihe ndị a: ụlọ akụ na-ajụ imeghe akaụntụ, ụlọ akụ na-ewe oge iji mepee akaụntụ karịa ka ịchọrọ, ụlọ akụ na-arịọ maka ozi ndị ọzọ n'ihu ụlọ akụ ga-emeghe akaụntụ ahụ, mgbanwe na amụma akụ, enweghị ike imeghe akaụntụ na ụlọ akụ nwere ngalaba na-aga ije na-adaba adaba, mkpa ọ dị itinye akwụkwọ na nkwụnye ego site na ozi karịa ịbanye n'ime ụlọ akụ, nkwụnye ego na-ewe ogologo oge karịa onye ahịa ahụ chọrọ, asụsụ mba ọzọ ejiri na ụlọ akụ, ụlọ akụ anaghị enye ọrụ niile onye ahịa ahụ chọrọ, gụnyere, mana ọnweghị oke ike izipu ego na akaụntụ ma ọ bụ ọnụnọ ma ọ bụ enweghị kredit ma ọ bụ kaadị debit ma ọ bụ ọnụnọ ma ọ bụ enweghị nke ịntanetị na akaụntụ ahụ, ma ọ bụ ụlọ akụ chọrọ ka ị gaa n'ụlọ akụ n'onwe gị tupu akaụntụ ahụ emeghe. Ọ bụrụ na ụlọ akụ ahụ chọrọ njem ị ga-ahụta maka njem ọ bụla na mmefu metụtara ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, naanị nhọrọ ezi uche dị na ya bụ imepe akaụntụ ahụ n'ụlọ akụ na-enweghị ngalaba na-aga ije dị mma maka onye ahịa ma ọ bụ ụlọ akụ na-enweghị ngalaba na-aga ije. Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị akaụntụ LL nwere ike imeghe maka gị, ị kwenyere na LL emezuola ọrụ ya.
N'ọnọdụ ọ bụla LL nwere ụgwọ maka ịkwụghachi ego niile akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ zụtara na mgbakwunye na akaụntụ akụ n'ihi na enweghị ike imeghe akaụntụ akụ ma ọ bụ ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na nhọrọ nke ụlọ akụ. Nke a bụ ikpe ọbụlagodi na isi ihe mere i jiri guzobe ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ nye iwu ka ọrụ metụtara ya bụ maka ịmepe akaụntụ akụ ma ọ bụ na otu ụbọchị dị mkpa efughị ​​n'ihi oge imeghe akaụntụ. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị nye iwu ụlọ ọrụ LLC na ụlọ akụ na ụlọ akụ gị na ịchọrọ ịhọrọ imeghe akaụntụ ahụ, naanị ihe ngwọta ya bụ maka LL, na nhọrọ ya, ịkwụghachi naanị akụkụ nke ụgwọ a na-akwụ LL na-eche maka akaụntụ akụ. imeghe, obere ego na oge megidere, ma ọ bụ nye gị nhọrọ ụlọ akụ ọzọ. LL emeela nyocha sara mbara iji chọta ụlọ akụ ndị ga-emeghe akaụntụ na-enweghị ị nọ, nke ọ na-eche na ọ bụ ụlọ ọrụ siri ike ma na-enye ọrụ ezi uche dị na ya. Ọ bụ ọrụ gị ịmezue akwụkwọ ndekọ ego ụlọ akụ, nye ọrụ dị mkpa yana iji nye akwụkwọ ndị ọzọ ụlọ akụ na-arịọ. A choro ulo oba ego iji nyochaa ndi ahia ha maka oru iwu na nke usoro iwu. Emeghị nke ahụ nwere ike ime ka ụlọ akụ tụfuo ikike ya na / ma ọ bụ gbochie ikike ya ịme azụmahịa na mba ụwa. Yabụ, amabeghị ụlọ akụ maka ịmeghara ihe ha chọrọ n'ihi nyocha.
Openingdị mmeghe ụlọ akụ chọrọ gụnyere, mana ọnweghị oke, mezue ngwa akaụntụ, ịbịanye aka na kaadị mbinye aka, inye akwụkwọ ikike ngafe gị, akwụkwọ ikike mbụ nke nwere adreesị ebe obibi gị, akwụkwọ ụlọ ọrụ gị, ụlọ akụ na / ma ọ bụ ọkachamara ọkachamara. leta na ihe ndị ọzọ achọrọ dị iche iche dabere na ụlọ akụ. Lọ akụ ahụ ga-akpọ oku iji chọpụta izi ezi nke akwụkwọ ndị ahụ. Site na ịnye gị aha ụlọ akụ LL chere na ọ ga-ekwe omume ma gbalịsie ike ịnye gị akwụkwọ mmeghe akaụntụ, LL emezuola ọrụ ya n'okpuru nkwekọrịta a.
Ọ bụrụ na ị nyere iwu ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ, mgbakwunye, oyiri, ruru ịdị uchu akwụkwọ nwere ike achọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nyere iwu maka ụlọ akụ, iwu nwere ike ịchọ ka ụlọ akụ ahụ debe akwụkwọ njiri mara nke gị yana akwụkwọ nrụtụ aka. Iwu nwekwara ike ịchọ onye na-elekọta ụlọ ma ọ bụ onye na-eweta ọrụ ụlọ ọrụ ka ha nwee akwụkwọ izizi nke akwụkwọ siri ike. Yabụ, ịnwere ike ịnye ọtụtụ ntọala mbụ.
A tụkwasịrị obi, ezigbo ala na ụlọ
Iwu obodo na nke mba dị iche iche dị iji gbochie itinye ego na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ ma ọ bụ ịkwaga ego na-akwadoghị. Dị ka ndị dị otú a, a chọrọ ndị nlekọta ego, ndị ọrụ akụ na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego iji chọpụta ndị kwesịrị ekwesị iji rube isi n'iwu ndị a yana nke mere na mgbe arịrịọ iwepụ ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ, a na-enyefe ndị ahụ dị oke ọnụ ahịa. Ya mere, e nwere ihe ndị ị chọrọ ịma nke ga-emezurịrị. Otu onye na - elekọta ụlọ anaghị eme ihe niile ma ọlị n'ihi na ị ga-arụsi ọrụ ike n'ihi na ime nke a nwere ike ibute nha na / ma ọ bụ ikike ikikere ịme azụmahịa.
Ihe ndị a bụ ndepụta nke ụfọdụ, mana ọ bụchaghị ihe niile, nke akwụkwọ achọrọkarị n'aka onye ahịa iji mepụta ntụkwasị obi zuru ụwa ọnụ: Mpempe Akwụkwọ Nyocha Ndị Ahịa, Nkwupụta nke Solvency, Ihe Akaebe nke Isi Ego, Akwụkwọ Ozi Ntụkwasị Obi, Ego Iwu na-achịkwa Iwu, Iwu nke enweghi ego, Mpempe akwụkwọ foto nke paspọtụ gị (ma ọ bụ otu akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị mgbe ụfọdụ zuru oke) nke akwụkwọ Notary, nke izizi nke adreesị gị gosipụtara (ọ ga-abụrịrị nke mbụ akwụkwọ ikike, nkwupụta kaadị kredit ma ọ bụ nkwupụta ụlọ akụ - ga-abụrịrị nke mbụ karịa ka nke a na-edegharị), Akwụkwọ ozi ndekọ ego ụlọ akụ. A ga - agwa gị ka ị bịanye aka na ụfọdụ akwụkwọ ndị dị n'elu ma nye akwụkwọ nnabata paspọtụ dị ka ekwuru n'elu, ụgwọ ọrụ (ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka ekwuru) na akwụkwọ ozi ụlọ akụ. Ihe edere n'elu bu iji nye ihe omuma atu nke akwukwo a choro mana ekwenyeghi nkwa na akwukwo ndi ozo agaghi acho ya na / ma obu aririo ndi ozo.
You na ahụta maka ịnye ozi maka mmezu ntụkwasị obi, gụnyere ntụkwasị obi nke ala, ntụkwasị obi ibi na akwụkwọ ndị ọzọ, gụnyere mana ọnweghị oke na akwụkwọ ikike yana ịnye anyị aha aha. Anyị na-arụ ọrụ ịkwadebe ma na-eweta mmefu tupu ịnye ozi iji mezue akwụkwọ gị. Yabụ, enweghị ike ịnye ozi anyị chọrọ iji tinye ozi gị na akwụkwọ abụghị ihe kpatara nkwụghachi maka mmefu ndị a na-enweghị ike ịkwadebe.
A na-eji akaụntụ ndị na-ere ahịa na kaadị akwụ ụgwọ ndị ahịa gị na-akwụ ụgwọ site na kaadị kredit. Ọ bụrụ na, maka ego ọzọ, ị na-arịọ enyemaka anyị na mmeghe nke akaụntụ ndị na-ere ahịa na kaadị akwụmụgwọ, anyị ga-agba mbọ imepe akaụntụ nke ga-egbo mkpa gị. Agbanyeghị, ị kwenyere na LL anaghị achịkwa ọrụ ndị ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa na-enye, ọnụego enyere, ma ọ bụ nke ndị ahịa ga-emepe ma ọ bụ mepee ụdị akaụntụ ịchọrọ, ma ọ bụ mbọ gị iji mezue akwụkwọ akaụntụ azụmaahịa achọrọ. Agree kwenyere na ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa, mana ọ bụghị LL, na-achịkwa ọsọ nke akaụntụ ahịa ahụ ga-emepe ma ọ bụ na agaghị emeghe. Agree kwenyere na ị na-ahụ maka dejupụta ngwa ahịa ahịa na ya niile ma na-enye ozi niile rịọrọ maka imeghe akaụntụ.
LL B GUGH GU KWES GUR GU FELỌ AKA NA-AHER MAKA Akaụntụ ma ọ bụ Usoro. NKE AKW COMKWỌ AHM NA-EME AKA AH COMR AF N'ERLỌ ACLỌ MLỌ AFLỌ AFLỌ THEYLỌ N'THEYLỌ AKW THEYKWỌ NA-EME. I KWES THATR THAT NA LL B NOTGH R PB RR FOR THELỌ AH BY N'BYLỌ BYLỌ ACLỌ EGO EGO.
Agree kwenyere ijide LL na-enweghị mmerụ ahụ maka atumatu akaụntụ ahịa na ọnọdụ gụnyere, mana ọnweghị oke, ihe ndị a: ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa na-ajụ imeghe akaụntụ, ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa na-ewe oge iji mepee akaụntụ karịa ka ịchọrọ, akaụntụ ahịa ụlọ ọrụ na-arịọ maka ozi ndị ọzọ tupu ha emepee akaụntụ ahụ, ego nkwụnye ego nke ụlọ akụ ahụ, mgbanwe na amụma, enweghị ike imeghe akaụntụ na ọnụego ịchọrọ, enweghị ike ịmepe akaụntụ ndị ahịa na usoro ịchọrọ, ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa ahụ abụghị na-enye ọrụ niile ma ọ bụ ọnụego nke onye ahịa ahụ chọrọ, gụnyere, mana ọnweghị oke, ụgwọ, ego, amụma ndị ahịa na ndị ọzọ.
Oge ụfọdụ, naanị nhọrọ ezi uche dị na ya bụ imepe akaụntụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ na-ebu ọnụ ahịa karịa ọkwa dị elu. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-azụ ahịa na-ahụta azụmaahịa a ka ọ bụrụ nke otu "nnukwu ihe egwu", n'agbanyeghị na onye ahịa ahụ na-eche na azụmaahịa ahụ dị oke egwu ma ọ bụ na ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere akụkọ ihe mere eme dị ọcha ma ọ bụ ndekọ ndekọ. Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị akaụntụ LL nwere ike imeghe maka gị, ị kwenyere na LL emezuola ọrụ ya.
N'ọnọdụ ọ bụla LL nwere ụgwọ iweghachi ego niile akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ azụrụ na mgbakwunye na akaụntụ azụmaahịa kaadị akwụmụgwọ n'ihi na enweghị ike imeghe ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa ma ọ bụ ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na nhọrọ nke ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa. . Nke a bụ ikpe ọbụlagodi na isi ihe mere i jiri guzobe ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ nye iwu ka ọrụ metụtara ya bụ maka mmeghe nke akaụntụ azụmaahịa kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ na oge mgbatị dị mkpa agbaghara n'ihi oge imeghe akaụntụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị nyere iwu ụlọ ọrụ na akaụntụ ahịa na ụlọ ọrụ na-ere ahịa azụmaahịa jụrụ ịmepe akaụntụ ahụ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ dị elu karịa ka ịchọrọ, naanị ihe ga-eme bụ LL, na nhọrọ ya, ịkwụghachi naanị akụkụ ahụ akwụ ụgwọ na LL deems metụtara ahịa na-emeghe akaụntụ ma ọ bụ a òkè nke kwuru ego, obere si n'akpa uwe mmefu, ma ọ bụ nye gị ọzọ ahịa akaụntụ nhọrọ. A na-akwụ ụgwọ ego akwụ ụgwọ maka ịtọlite ​​akaụntụ ndị ahịa na ndị ọzọ iji mee nyocha nyocha nke ihe egwu, yabụ na-akwụkarị ego akwụ ụgwọ iji mepụta onye na-azụ ahịa n'ụzọ zuru oke. LL emeela nchọpụta sara mbara iji chọta ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịa nke ga-emepe akaụntụ maka azụmaahịa dị ala, ọkara na nnukwu ihe egwu, nke ọ na-eche na ha bụ ụlọ ọrụ nwere ezi uche ma na-enye ọrụ ezi uche dị na ya. Site na ịnye gị aha ụlọ ọrụ akaụntụ ahịa LL hụrụ na ọ ga-ekwe omume ma na-agba mbọ ịnye gị akwụkwọ mmeghe ma ọ bụ ndị na-ezo aka na akaụntụ, LL emezuola ọrụ ya n'okpuru nkwekọrịta a.
Mmemme ụlọ ọrụ, nke na-abụkarị nọmba ekwentị, nọmba faksị na adreesị a na-enye dị ka naanị maka ndị ahịa ọ dị mma. Nọmba ekwentị ihe omume ha na-abụkarị akara ekwentị akpọrọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ya mere, ndị na-akpọ oku ga-ahapụ aha ụlọ ọrụ nke ha na-akpọ maka ya ka anyị wee mata onye a ga-eziga ozi ahụ. LL abụghị maka ozi furu efu, oku ekwentị efu, faksị, ohere azụmaahịa furu efu ma ọ bụ maka mfu ọ bụla. Dị ka o kwesịrị ịdị, nkwụghachi adịghị adị ozugbo ọrụ ahụ malitere n'ihi na LL na-eburu ọnụ ahịa ihe omume ụlọ ọrụ ahụ n'ihu.
AKWEDKWỌ AKWEDKWỌ & KWES /R / / SHELF Plọ ọrụ
Usoro ọrụ ndị a na-akọwa oke na mmachi nke ọrụ ụlọ ọrụ nye Onye Ahịa yana Iwu A Na-anabata nke Ọrụ na Ngwaahịa nke Onye Ahịa. Companylọ ọrụ ga-abụ naanị onye nchịkwa ikpe ikpeazụ maka nkọwa nke nkwekọrịta ahụ. Site n'iji Ọrụ na Ngwaahịa nke Companylọ Ọrụ, Onye Ahịa kwenyere na iwu ga-agbakwunye ya edepụtara na nkwekọrịta a.
Ọ bụrụ na enyere iwu, ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị ahịa ahịa ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ dị ụkọ. Companylọ ọrụ ahụ ga-ebunye ndị Ahịa ngwugwu nnabata site na email ma ọ bụ nnyefe nzipu ozi. Ahịa ahụ bụ ọrụ maka ịmecha ngwugwu nnabata ma weghachite ya nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ. Ozugbo a nabatara ngwugwu nnabata (nke na-ezo aka na ngwa na / ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ achọrọ) nke Onye Ahịa dechara ya wee laghachi na Companylọ ọrụ ahụ, Companylọ ọrụ ahụ ga-ebugara Dun & Bradstreet ozi ebumnuche, mana ọ gaghị ekwe nkwa, iji nye ọrụ ndị a :
1. Nye profaịlụ otuto azụmaahịa na otu ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ kredit azụmaahịa.
2. Mee ka usoro ụlọ kredit ahụ rụọ ọrụ ngwa ngwa site na creditlọ ọrụ ma ọ bụ ndị mmekọ ya na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa nye ụlọ ọrụ na-ahụ maka kredit (ies) ma ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ maka ọrụ ahụ emechara.
3. Nye Pọtụfoliyo Dun & Bradstreet (D&B) na akaụntụ.
4. Mepụta isi akụkọ D&B 6 isi.
5. Mepụta akara 5 D&B na ọkwa na akụkọ 6.
6. Nyefee ozi D&B ha rịọrọ ka imepụta akara D&B.
7. Aka na ndị ahịa guzosie 4-6 ahia zoro maka ụlọ ọrụ.
8. Nyochaa ndenye ego 6 D&B.
Onye Ahịa ahụ ga-eme ihe ndị a:
1. Zuru oke nnabata nnabata ma weghachite ya na Mgbakwunye Companylọ ọrụ.
2. Nye ozi niile Companylọ ọrụ na / ma ọ bụ ndị mmekọ ya chọrọ iji mezue profaịlụ otuto.
3. Soro ntuziaka nke Companylọ ọrụ na / ma ọ bụ mgbakwunye na usoro mmecha profaịlụ Ebe E Si Nweta.
Otu ụlọ ọrụ meworo agadi ma ọ bụ ụlọ ọrụ shelf bụ ụlọ ọrụ, LLC ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ yiri ya nke edobere na ụbọchị gara aga.
OZI OFLỌ PLỌ NKE COMLỌ Ọrụ NA Ngwaahịa B AT NA Ọ B SOL ISKP SOLR SOL ỌJỌ AKA. Ọ dịghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ego, ndị na-ewepụta ndị na-enye ha ozi nke atọ, ndị ahịa azụmaahịa ma ọ bụ ndị dị otú ahụ, na-eme akwụkwọ ikike ọ bụla, gụnyere akwụkwọ ikike nke ọrụ ma ọ bụ nke nwere ike iji ya. Ha anaghị eri akwụkwọ ikike ọ bụla maka ihe ndị nwere ike ịnweta site na ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ na ngwaahịa ma ọ bụ maka eziokwu, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ozi ọ bụla ma ọ bụ ahịa ahịa nke nchekwa nke nchekwa nke US. Ọ B UNR OTHER NA Ọ B OTHERGH OTHER KWESISR OTHER KWESISR IN KWES STR IN N'INLỌ NCHE A. Nke a na-agụnye ọnwụ nke mbugharị, ma ọ bụ na-esite na oge, ma ọ bụ enweghị ike ịchọta ikike zuru oke iji nweta nsụgharị ma ọ bụ na ọ bụghị nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ya ma ọ bụ ndị ọzọ na-akpata, ma ọ bụghị ndị ọzọ na-enweghị ọrụ. Plọ ọrụ ahụ abụghị onye isi ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkwado ụgwọ maka onye ahịa. COMlọ ọrụ na-enye ọrụ ụgwọ ọrụ. ỌHUSR IS AKA B RR R FORB FORR FOR FORLỌ N'FORLỌ FORLỌ EDLỌ EDLỌ TOLỌ TOLỌ TOLỌ ASLỌ KWES ASR TO KWES ASR AND KWES ASR AND KWES ANDR AND KWES .R AND. EIN MA Ọ B TA NT IDR ID NỌMBA NKE AKW OFKWỌ / SHELF PLỌ NKE KWES MR M KWES NOTR MAT MATBỌD THE OFLỌ NKE PLỌ NKE ANDLỌ NKE NA-EGO NA-EGO NA-adịbeghị anya.
IHE KWES CR C LLỌ OFLỌ OFLỌ NKE FORLỌ FORLỌ NILE KWES ALLR ALL KWES BYR BY N'BYLỌ KWES ,R OR, MA Ọ BY Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ B OTHER Ọ BM Ọ BM Ọ BM Ọ BM Ọ BM NA KWESACR,, NT ORR OR MA Ọ B ST ỌB STR OR ORB ST Site ahịa Naa ego na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ. Ọrụ ndị a dị n'elu nwere ike iburu ụbọchị 120 ruo 180 ụbọchị ahịa site na ụbọchị Onye Ahịa laghachiri na Companylọ ọrụ ahụ na-enweta nnabata nnabata nke ọma.
N'IHI NA Ọ PULR D DB D DLỌ ERLỌ ERLỌ EDLỌ NT ,KWU, ,BỌR AG KWES AGR NOT KWES NOTR NOT KWES CONRED KWES CRR CR AGLỌ AKWENKWỌ AHENR D KWESECTR D KWESECTR UN KWES UNR TIME KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND. Onye ahịa na-aghọta na enwere ọrụ nhazi ọrụ dị mkpa tupu emee ka akwụkwọ akụkọ ahụ kwenye maka ịkọ akụkọ gbasara ụlọ ọrụ. KWESMRRE KWES PRIL KWESRER OR KWES ORR OR KWES ORR OR KWES WITHR WITH KWES WITHR WITH KWES WITHR WITH KWES CRR CR KWES CRR CR CRLỌ KWESORTR ON KWES HAVER ON KWES ONR ON KWES CRR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES .R. KWES .R. KWES .R.. COMlọ ọrụ ahụ nwere ike izipu ozi na ụlọ ọrụ na-akọ akụkọ ego ma ọ bụghị na-achịkwa nkọwa ha nke data ahụ, N'AGBANYEGH DO NA-EME NT NOKWU ND THEY NA-AKW SKWỌ AKW REKWỌ AKW PRKWỌ, NA-AKW THATKWỌ NA AKA NA-AKA AKA A GA-EZU Ọ B IFR YOU NA YOU MA Ọ B THE AGLỌ EDLỌ CRLỌ EDLỌ EDLỌ NOTLỌ DOLỌ DOLỌ AKA NA-EME NA-ECHICHE. Ego ọ bụla ọzọ dị ka akụkụ nke usoro kredit ga-abụ ọrụ dịịrị ndị ahịa. Agaghị akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ndị a maka ụlọ ọrụ dịka ha bụ ọrụ ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ nyere. Ndị a gụnyere, mana ọnweghị oke na ego D&B guzobere sitere na efu ruo narị ise na iri iteghete na iteghete, ego ewulitere akaụntụ azụmaahịa, ọnụ ahịa ngwaahịa sitere n'aka ndị na-ere ahịa, ụgwọ ịgba akwụkwọ steeti, ụgwọ ikike azụmaahịa, ekwentị etinyere azụmaahịa ma ọ bụ ekwentị ndị ọzọ metụtara. ụgwọ, ụgwọ nkwupụta kredit nke onwe gị, ụgwọ ụlọ akụ na ụgwọ ọ bụla ọzọ a na-ahụkarị maka azụmaahịa niile. Ihe niile edere n’elu bụ ụgwọ nke onye ọ bụla na-ezube azụmaahịa na-atụ anya ya.
Ahịa na-aghọta ma na-ekweta na ya / ha / ha ga-arụkọ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ na njikwa nke okwu a, na-eme ihe niile dị mkpa iji nye ụlọ ọrụ ihe ọmụma ụlọ ọrụ rịọrọ; Ọzọkwa, Onye Ahịa ahụ ga-ahapụ ọrụ ahụ n'okpuru nduzi na njikwa nke ụlọ ọrụ ọ bụrụhaala na nkwekọrịta a ka dị, na Onye Ahịa agaghị enye ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ndị metụtara ya ma ọ bụ gwa onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla okwu banyere okwu a. ewezuga dịka ụlọ ọrụ gwara gị ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a nwere ike imebi iwu.
Na mgbakwunye, Onye Ahịa kwenyere ịkwụ ụgwọ azụmaahịa nke Ahịa ya na ụgwọ / akaụntụ onwe ya nke oge gụnyere ma ọnweghị oke na kredit, kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ na mgbazinye ego. Ndị ahịa kwenyere na ha agaghị etinye akwụkwọ maka kredit na-ebughị ụzọ nye ụlọ ọrụ ahụ ọkwa. Onye Ahịa kwenyere na mkpokọta kredit a na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ dị ka ndị ndụmọdụ iji nyere aka inweta bụ mkpokọta mbọ nke ndị ahịa na ụlọ ọrụ ahụ.
Site ugbu a gaa n'ihu, Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike ịgbanwe Agreement ahụ n'oge ọ bụla na site n'oge ruo n'oge na ụdị mgbanwe ọ bụla ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka dị ka ndị ahịa niile mgbe Companylọ ọrụ ahụ nakweere ma bipụtara na obere peeji nke https: // companiesinc .com / ma ọ bụ ọnọdụ na-esote dị ka ebe nrụọrụ weebụ nwere ike imelite.
Nyefee ụlọ ọrụ
Ọ bụ ezie na aha gị ma ọ bụ onye ị họpụtara ga-egosi na akwụkwọ ndị na-enyefe gị ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ onye ị họpụtara, ị kwenyere na aha gị ma ọ bụ onye ịchọrọ gị nwere ike ọ gaghị apụta na edemede nke mmekorita ma ọ bụ isiokwu nke nzukọ. Enwere akwụkwọ dị iche nke na-enyefe ụlọ ọrụ ahụ n'aka gị ma ọ bụ onye nyere gị ọrụ. Nke a yiri aha aha onye na-emepụta ụgbọala nke na-adịgide n'ụgbọ ala, mgbe ahụ, a na-eji akwụkwọ aha ya dị ka iwu, na-ejikọ mbufe. N'otu aka ahụ, anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị na-etolite ụlọ ọrụ dị ka ndị na-etinye ọnụ ?? ma mepụta ụlọ ọrụ dị obere dị ka onye nhazi ?? wee mezuo akwụkwọ ndị na-enyefe gị ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ onye anyị họpụtara ga-abụ onye isi ọrụ mbụ, onye isi, onye otu ma ọ bụ onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ. Agree kwenyere na ịnyefe ụlọ ọrụ n'aka gị ga-apụta na akwụkwọ mbufe ọ bụghị isiokwu ha.
Ziga ozi ga
Y’oburu n’itinyela oru gunyere izipu ozi, igha gha ugwo ugwo na ejizi ihe ndi ezigara gi. A nkwụnye ego nke iri abụọ na ise US dollar, ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị ezipụta, ga-atụkwasịkwara na-eri nke gị mail ebugharị ọrụ. Nkwụnye ego a ga-agbanwe site na nnabata gị. I nyekwara anyị ikike ịgba ụgwọ kaadị akwụmụgwọ gị na faịlụ iji kpuchie ụgwọ mbupu maka ngwugwu.
IHE D NKE DIS MMA
Enwere ike ịnwe ụgwọ ndị ọzọ dị iche iche metụtara iwu gị ka anyị wee rịọ nke na-edeghị na weebụsaịtị anyị. Feesgwọ ndị a nwere ike ịbụ maka ụgwọ ọzọ maka mbupu akwụkwọ, nkwado akwụkwọ, iwu nyocha, ụgwọ mmeghari ohuru, ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị a na-atụghị anya ha nwere ike jikọta na iwu gị ma ọ bụ mmụba nke ego anyị chọrọ na ego anyị matara tupu anyị ebipụta ọnụahịa emelitere. Adreesị ndị a na weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị abụ nke ugbu a. Fọdụ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ niile na-arụ ọrụ site na ebe obibi dịpụrụ adịpụ karịa n'otu ebe azụmahịa. Edepụtara adreesị na foto, gụnyere ma ọnweghị oke na foto nke ụlọ, gosipụtara maka ebumnuche akụkọ ihe mere eme ma ghara ịnọchite ọnọdụ dị ugbu a. Biko dị njikere ịkpọtụrụ onye nnọchi anya maka adreesị kwesịrị ekwesị tupu izipu ozi. Edere ndị ọka iwu Limited na June nke asatọ na afọ narị itoolu na narị isii na steeti Nevada nke US. Ndị nwe ụlọ ọrụ ugbu a nwetara ya na Jenụwarị nke atọ n'afọ ahụ puku abụọ na asatọ. Companylọ ọrụ ahụ abanyeghị na azụmaahịa ya ugbu a n'oge ndụ ya. Aha ụlọ ọrụ ahụ agbanweela ma ụlọ ọrụ ahụ agbakeghachi, degharịa ma weghachite ya. Kwenyere na ị gaghị adabere na afọ LL dị ka ihe mere ị ga-eji na-azụ ahịa anyị. Nkwekọrịta a dum na-emetụta azụmahịa niile dị ugbu a na ọdịnihu n'etiti ndị ọzọ.
Mgbanwe iji kwekọrịta
Agree kwenyere na anyị nwere ike idegharị usoro na ọnọdụ nke Agreement a ma gbanwee ọrụ enyere n'okpuru nkwekọrịta a. Ntughari ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla dị otu a ga - abụrịrị ihe na - adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ọ buputa nsụgharị edegharịrị Nkwekọrịta ma ọ bụ gbanwee na ọrụ (s) na weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ na ọkwa zitere gị site na email ma ọ bụ ozi oge niile. I kwenyere inyocha weebụsaịtị anyị, gụnyere Agreement a, site n'oge ruo n'oge ịmara banyere nyocha ọ bụla. You kwenyere na, site n'ịnọgide na-eji Ọrụ anyị na-eso ọkwa nke ngbanwe ọ bụla na Agreement a ma ọ bụ mgbanwe na ọrụ (s), ị na-erube isi na nyocha ọ bụla dị otú ahụ.
Kwenyere na ọrụ anyị niile, yana ọgwụgwọ gị naanị, gbasara ọrụ (s) enyere n'okpuru nkwekọrịta a na mmebi ọ bụla nke nkwekọrịta a bụ naanị oke ego ị kwụrụ maka ụdị Ọrụ a. LL agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla, enweghị atụ, nke na-apụtaghị ihe, nke pụrụ iche ma ọ bụ nke mebiri site na iji ma ọ bụ enweghị ike iji nke Ọrụ ọ bụla ma ọ bụ maka ọnụ ahịa ị nweta ọrụ ndị ọzọ. Maka ụfọdụ steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo anaghị anabata mwepu ma ọ bụ mmachi iwu dị na mmebi ọ bụla nwere ike pụta ma ọ bụ ihe ọghọm, na steeti ndị a, ógbè ma ọ bụ obodo ndị dị otu a, ọrụ anyị amachighị oke dị ka iwu kwadoro. Ozugbo ahaziri aha ụlọ ọrụ, ha anaghị enwe ike ịrịa ọrịa na enweghị ike ịkwụghachi. Tupu ị nyefee iwu gị, nyochaa nyocha na izi ezi nke aha ụlọ ọrụ gị.
LL na-ewepụ ma ọ bụ mfu ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla sitere na, mana ọnweghị oke: (1) ọnwụ ma ọ bụ ibu ọrụ sitere na igbu oge ma ọ bụ nnweta nnweta nnweta; (2) ọnwụ ma ọ bụ ibu ọrụ sitere na ntinye data ma ọ bụ nnyefe data ezughị ezu; (3) ọnwụ ma ọ bụ ibu ọrụ nke omume Chineke kpatara; (4) ọnwụ ma ọ bụ ụgwọ sitere na njehie, enweghị ọrụ, ma ọ bụ nkwupụta ọ bụla na ozi ọ bụla enyere n'okpuru nkwekọrịta a.
Agree kwenyere na anyị agaghị aza ajụjụ maka ọnwụ ọ bụla nke ndebanye aha na ojiji nke aha ụlọ ọrụ registrant, ma ọ bụ maka ịkwụsị azụmahịa, ma ọ bụ ụdị ọ bụla, na-enweghị atụ, nke pụrụ iche, nke na-akpata, ma ọ bụ nke mmebi ọ bụla na-akpata (gụnyere uru furu efu) n'agbanyeghị ụdị omume ma na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere ileghara anya), ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enyere anyị ndụmọdụ banyere ụdị mbibi dị otú ahụ.
Agree kwenyere ịhapụ, kwụọ ụgwọ, ma jide anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị nwe na ndị mmekọ na-adịghị njọ na ụgwọ niile, ebubo na mmefu, gụnyere ụgwọ onye ọka iwu, nke ndị ọzọ metụtara ma ọ bụ na-ebili n'okpuru nkwekọrịta a, ndị Ọrụ enyere n'okpuru ma ọ bụ ojiji nke Ọrụ ndị ahụ, gụnyere ngọngọ na-enweghị mmachi nke ikike ọgụgụ isi ọ bụla ma ọ bụ ikike ọzọ nke mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, ma ọ bụ site na imebi iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu anyị metụtara ọrụ (s) enyere . Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eyi LL egwu site na ndị ọzọ, anyị nwere ike ịchọ nkwenye sitere n'aka gị gbasara nkwa gị iji mezuo anyị. Enweghị ike inye mmesi obi ike ndị ahụ ka a ga-ewere na ọ bụ mmebi nke nkwekọrịta gị.
Agree kwenyere na ịghara irube isi na ndokwa ọ bụla nke nkwekọrịta a nwere ike ịtụle anyị ka ọ bụrụ mmebi ihe na anyị nwere ike ịnye ọkwa ederede, na-akọwa mmebi ahụ, gị. Agaghị emebi iwu ọ bụla site na gị ka a ga-agọpụrụ ya naanị n'ihi na anyị emeghị ihe na mbụ na nzaghachi nke ahụ, ma ọ bụ mmebi ọ bụla ọzọ ị na-emebi.
LL na-achọ ịnye ọnụahịa ziri ezi na ịsọ mpi. LL nwere ikike ịgbanwe usoro ọnụahịa ya n'oge na-enweghị ọkwa. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkọtara ọnụego maka mmeghari nke azụmaahịa azụmaahịa mgbe emechara azụmaahịa izizi, mana ọnụego ahụ nwere ike gbanwee n'ọdịnihu mgbe mmegharị ahụ ruru n'ihi ụgwọ gọọmentị na-atụghị anya ya ma ọ bụ nke ego, ma ọ bụ maka ndị ọzọ ihe kpatara ya. Nkwupụta nke LL mere na anyị ga-ezute na / ma ọ bụ merie ọnụahịa onye asọmpi ka a ga-atụgharị ka anyị na-akụ ọnụahịa ndị osompi ma na-echekwa ikike iti ọnụ ahịa ndị asọmpi na naanị nhọrọ LL. LL anaghị akwụghachi ụgwọ dị iche na LL na ọnụ ahịa onye asọmpi mgbe ire ere agwụla.
Agree kwenyere na, site na ndebanye aha ma ọ bụ ndoputa aha ụlọ ọrụ ị họọrọ, ndebanye aha ma ọ bụ ndoputa dị otú a anaghị enye nchebe pụọ na ndebanye aha, ndoputa, ma ọ bụ ojiji nke aha ụlọ ọrụ. Tụkwasị na nke a, ị gaghị adabere n'eziokwu na e guzobela ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ na anyị kwesịrị ịtụ ahịa kaadị, akwụkwọ ozi, ma ọ bụ nweta mmefu ndị ọzọ na-ebu aha ụlọ ọrụ ị chọrọ ruo mgbe MGBE ị natara akwụkwọ stampụ mbụ, steeti, mpaghara ma ọ bụ gọọmentị etiti. . (Statesfọdụ steeti, mpaghara ma ọ bụ obodo ga-ewepụta “Asambodo” nnabata, dịka ọmụmaatụ).
You kwenyere ma nye ikike na ozi ị nyere anyị ka anyị debanye aha ma ọ bụ chekwaa aha ụlọ ọrụ gị bụ, nke kachasị mma nke ihe ọmụma na nkwenkwe gị, nke ziri ezi ma zuo oke, yana na mgbanwe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu na ozi a ga-enye anyị n'oge n'ụzọ dịka usoro mgbanwe ndị dị n'oge ahụ. Ọ bụrụ na enyere iwu gị site n'aka onye nnọchi anya, ọ ga-eme nnukwu mgbalị iji dee ozi ziri ezi gbasara aha ụlọ ọrụ ị họọrọ, aha gị, adreesị gị na ozi ndị ọzọ. Otú ọ dị, mmejọ ma ọ bụ nkọwahie na-eme. Ga - ejide LL enweghị mmerụ ahụ maka ụdị mmejọ ma ọ bụ ịkọwahie ya. Nhọrọ kachasị mma bụ ka ị nye ozi ahụ na ederede site na email ma ọ bụ ụzọ eletriki ndị ọzọ iji nyere aka mee ka amụma dị oke mma. Kwenyere na ojiji nke Ọrụ anyị bụ naanị maka ihe egwu gị. Agree kwenyere na ụdị (s) ahụ ka enyere na ntọala "dị ka ọ dị," "dị ka ọ dị". Anyị na-egosipụta nkwupụta niile nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ gosipụta ma ọ bụ na-egosi, gụnyere mana na ọnweghị oke na ikike nke azụmaahịa, ahụike maka otu ebumnuche na enweghị mmebi iwu. Anyị anaghị enye ikike na Ọrụ ndị ahụ ga-eme ihe ị chọrọ, ma ọ bụ na Ọrụ ndị ahụ ga-abịa n'oge, nchekwa, ma ọ bụ nweere mperi; anyị enweghịkwa ikike ọ bụla maka nsonaazụ ndị a ga-enweta site na iji Ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ maka izi ezi ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ozi ọ bụla enwetara.
Anyị, naanị anyị nwere ikike iji jụ ịdenye aha ma ọ bụ dobe aha ụlọ ọrụ ị họọrọ. Ọ bụrụ na anyị jụ ịdebanye aha ma ọ bụ chekwaa aha ụlọ ọrụ gị, anyị kwenyere ịkwụghachi ego (s) mkpa gị. I kwenyere na anyị agaghị atụpụrụ gị ụgwọ maka mfu ma ọ bụ mmebi nke nwere ike ịpụta na anyị jụrụ ịdebanye aha ụlọ ọrụ gị aha.
Isi okwu ngalaba dị na nkwekọrịta a bụ maka ebumnuche naanị ya agaghị emetụta ihe ọ pụtara ma ọ bụ nkọwa nke nkwekọrịta a.
Ọ bụrụ na enwere ike igbochi nke ọ bụla n'ime nkwekọrịta nke Agreement a, a ga-ejedebe ma ọ bụ kpochapụ ihe ndị dị otú ahụ ruo n'ókè kacha mkpa ka Agreement ahụ wee nọgide n'ụzọ zuru oke na mmetụta.
Agree kwenyere na nkwekọrịta a zuru oke na nkwekọrịta naanị n'etiti gị na anyị gbasara Ọrụ anyị. Nkwekọrịta a gbanwere nkwekọrịta na nghọta ọ bụla tupu oge a, ma ọ bụ nke ọdịnala, omume, iwu ma ọ bụ ụkpụrụ guzobere.
Edere nkwekọrịta a na steeti Florida nke US, a ga-arụkwa ya dịka iwu Florida si dị, na -enweghị nhọrọ iwu iwu ya. Otu ọ bụla na nkwekọrịta a na-edo onwe ya n'okpuru ikike naanị nke Steeti na Federal Courts nwere ikike na County nke Broward na steeti Florida, ma wepụ ikike ọ bụla, ebe mgbakọ, ma ọ bụ usoro mgbagha na-adịghị mma n'ụlọ ikpe ndị dị otú ahụ. Na ihe obula iji mezuo nkwekorita a, ndi otu a ga - enwe ikike inweta ugwo ulo ikpe na ugwo ikpe.
NKWỌ NKE NKỌKWỌ
Nkwekọrịta a bụ nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na LL ma gbanwee nkwekọrịta ọ bụla ọ bụla, ma ọ bụ ọnụ ma ọ bụ ederede, n'etiti gị na LL.
-I meela maka ịhọrọ Lawyers Limited na ụdị ọrụ anyị metụtara dị ka ọrụ ịgba akwụkwọ gị.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nchegbu ọ bụla ị nwere.
Ndị ọka iwu nwere oke
Osimiri Pompano, FL 33064
Onwe-efu: + 1-888-234-4949
Kọntaktị kọntaktị: inqudị ajụjụ zuru ezu na ibe a
Emelitere ikpeazụ na July 23, 2021